संरक्षणका लागि ब्लगिङ (Blogging4Conservation]: संरक्षण | Conservation Blog in Nepal
जलविद्युत र गोवरग्यासको सम्बन्ध
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Tuesday, November 04, 2014 with No comments
एकातिर लोडसडिङको चर्को मार त अर्कातिर ग्रामीण भेगमा खाना बनाउने इन्धनको अभाव अथवा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गईरहेको जलवायु परिवर्तनको असर, जे भने पनि आखिर यी दुबै समस्याले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रभाव पारिराखेको छ । सो समस्या समाधानका लागि अत्याधुनिक शहरदेखि दुरदराजको ग्रामीण बस्तीसम्म चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । ग्रामीण वस्तीसम्ममा खाना बनाउन तथा बैकल्पिक उर्जाको रूपमा गोवरग्यास प्रविधिलाई विकास गरी प्रयोग गर्न सकियो भने उर्जा अभाव, जलवायु परिवर्तनको समस्या अनुकूलनमा मात्र नभई सम्भावित जलविद्युत उद्योगमा पनि दिगोपन बनाउन सकिन्छ ।
जलविद्युत विकासका सम्भावना भएका ठाउँमा वा पानीको स्रोत वरपरका वस्तीमा गोवरग्यास प्रविधि निर्माण तथा प्रयोग गर्न सकेमा अहिले अत्याधिक प्रयोग भईरहेको दाउराको मात्रालाई कम गर्दै पानीको स्रोत संरक्षणमा सहयोग गर्न सकिन्छ । हालसम्का विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा गोवरग्यास प्रयोग भएमा प्रतिघर प्रतिवर्ष २.४४ टन दाउरा वचत वनजंगलको संरक्षण भई पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ भने प्रतिघर प्रतिवर्ष ७ टन कार्वन कम उत्सर्जन भई जलवायु परिवर्तनका समस्या अनुकूलनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । त्यसैले जलविद्युतको विकासका निमित्त गोवरग्यास प्रविधि तथा प्रयोगको अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध रहेको छ ।
गोवरग्यास प्रविधिले माथि उल्लेखित जलविद्युत उद्योगको दिगोपना तथा जलवायु परिवर्तनको समस्या अनुकूलनमा सहयोग पु¥याउनुको साथसाथै कृषि उत्पादनका लागि गुणस्तरीय जैविक मल निर्माण तथा प्रयोगका लागि मार्ग खुल्ला गर्दछ । गाईबस्तुको गोवरमा रहेको मिथेन ग्याँस खेतीपातीका लागि हानीकारक हुन्छ तर गोवरग्यासमा प्रयोग गरी बचेको लेदोमा उक्त ग्याँसरहित हुने र उक्त लेदोलाई अन्य फोहोरसँग मिसाएर जैविक मल बनाउन सके गुणस्तरीय कृषि उत्पादन मात्र नभई महंगो रासायनिक मल किन्नुपर्ने बाध्यता टर्दछ ।
विश्व तापमान बृद्धिको समस्या समाधान गरि जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण वा यसमा अनुकूलन गर्नको लागि साँच्चिकै कुरा सँगै काम ९ऋयmष्लन ष्लतय ब्अतष्यल० गर्ने हो भने वा सम्भावित तथा बनिसकेका जलविद्युत केन्द्रको दीगो सञ्चालनको लागि पानीका स्रोत वरपरका बस्तीहरूका भान्छालाई दाउरारहित बनाउन गोवरग्यास प्रविधि निर्माण तथा प्रयोग हुनु जरूरी छ । रूख नरहे पानी र पानी नरहे हामी यस धर्तीमा रहन सक्दैनौं भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै वन प्रयोगको विकल्प खोज्न हामी सबै लामबद्ध हुनै पर्दछ ।
चिलिमे प्रतिभापुञ्ज, २०७० मा प्रकाशित
Labels: जलविद्युत, प्रविधि, वातावरण, संरक्षण
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Wednesday, November 14, 2012 with No comments
उच्च हिमाली क्षेत्र तथा अन्य अन्तर्रास्ट्रिय महत्व भएका क्षेत्रहरूलाई रामसार क्षेत्रमा समावेस गर्ने नीति अनुरूप नेपाल सरकारले गोसाइँकुण्ड क्षेत्रलाई २३,सेप्टेम्बर, २००७ मा रामसार क्षेत्रमा सूचिकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सिमसार नीति २०५९ अनुसार गोसाइँकुण्डलगायतका चार क्षेत्रलाई रामसार क्षेत्रमा सूचिकृत गराएको छ । सन् १९७१ मा नेपालले रामसार महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै रामसार क्षेत्रको व्यवस्थापन वा संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाई सकेको छ । महासन्धिको दफा ३ -१) र निर्देशन सन् १९९६ लाई अँगाल्दै राष्ट्रिय सिमसार नीति २०५९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
वि.सं. १९७८ मा स्थापना भएको नेपालकै पहिलो हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रामसार क्षेत्र नं. १६९३ मा सूचिकृत गोसाइँकुण्ड तथा त्यसका वरीपरीका क्षेत्रको संरक्षण वा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज/मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजना, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सहयोग परियोजना/डब्लुडब्लुएफ र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापकहरूको मञ्चले 'गोसाइँकुण्ड तथा वरीपरीका सिमसारहरूको स्थलगत व्यवस्थापन योजना' तयार गरेको छ । नेपालको अनुपम सिमसार परिस्थितिकीय प्रणालीलाई जोगाई राख्नको लागि साझा प्रतिवद्धताका रूपमा उक्त
'स्थलगत व्यवस्थापन योजना' तयार गरिएको हो ।
जैविक विविधतामा सम्पन्न गोसाइँकुण्ड क्षेत्र रैथानीय, दुर्लभ र सङ्कटापन वनस्पति एवं चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको आश्रमको रूपमा परिचित छ । हिमचितुवा, रातो हाब्रे -रेडपाण्डा), कस्तुरी मृग, हिमाली थारलगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको आश्रयस्थल बनेको यस क्षेत्रमा निकुञ्जले संरक्षण प्रदान गरेका ल्यारिक सल्लो, १० भन्दा बढी प्रजातिका लाली गुँरास र सुनाखरीका जातहरू रहेका पाइन्छन् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनादेखि नै लोपोन्मुख वन्यजन्तुका वासस्थान जोगाइ राख्ने र ती वनमा आश्रयस्थल बनाएका प्राणीहरूको संरक्षण, त्यहाँ उपस्थित विविध प्राकृतिक, जैविक सम्पदाको संरक्षण,धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्ने क्रममा स्थानीय तहमा अपनाइएको भू उपयोग पद्धतिबाट परिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्ने असर घटाउने तथा निकुञ्ज र आसपासमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको मानवीय दोहन घटाएर निकुञ्जको प्राकृतिकपन र सुन्दरता जोगाउने भन्ने लक्ष्यमा आधारित रहेर निकुञ्जले कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
यी उल्लेखित विविधतासँग मानव जीवनयापनको महत्वपूर्ण आधार गाँसिएको हुन्छ । जैविक विविधता र मानव जीवन एकअर्काका परिपूरक हुन् । माथि उल्लेखित सम्पदाको संरक्षण विना मानवको जीवन पनि असहज बन्दै जानेछ । उच्च हिमाली भेगमा रहेको गोसाइँकुण्ड तथा वरीपरीका क्षेत्र परिस्थितिकीय प्रणाली वा जलवायु परिवर्तनका समस्याका दृष्टिकोणले जोखिम र संवेदनशील बन्दै गएको विभिन्न वातावरणविद्हरूले बताएका छन् । यस क्षेत्रमा हुने गरेको पर्यटकीय व्यापारका कारण पनि विभिन्न संरक्षण सम्बन्धि समस्या वा चुनौतिहरू थपिदै गएका छन् । मानवले गर्ने गरेको वातावरण प्रतिकुल व्यवहारले यहाँको परिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पुर्‍याइराखेको छ । जताततै फालिएका सिसाजन्य, प्लाष्टिकजन्य र विविध जैविक, अजैविक फोहोरका कारण दिनानुदिन यहाँको वातावरण प्रतिकुल बन्दै गएको छ । सामान्यत विचार गर्ने हो भने पनि धार्मिक आस्थाका स्वरूप कुण्डमा चढाइएका नरिवल र अन्य प्रसादजन्य पदार्थले पनि कुण्डलाई प्रदुषित बनाएको हुन्छ । होटल व्यवसायीका लापारवाहीका कारण वा तीथालुलाई लक्षित गरी व्यवस्थित शौचालय बनाउन नसक्दा पनि शौचालय प्रयोग पछि उक्त फोहोरहरू कुण्डमा आउने गरेका छन् । गोसाइँकुण्ड प्रयोगकर्ताहरूले फाल्ने गरेका फोहोरले कुण्डको संरक्षणमा निकै चुनौति दिइरहेको हुन्छ ।
नवीकरणीय उर्जा प्रविधि वा जलविद्युतका अभावका कारण यस क्षेत्रमा खाना बनाउने र डाइनिङ हल तातो पार्नका लागि दाउराको प्रयोग हुन्छ । जसका कारण वर्षोनी धेरै मात्रामा वन विनास हुने गरेको छ । खाना बनाउन होस् वा कोठा तातो बनाउन दाउराको प्रयोग भनेको बाध्यकारी समस्या हो । दाउराजन्य इन्धनमा कमी ल्याउन वा रोक्नको लागि विद्युतीकरण नहुनु नै यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो । यसरी इन्धन प्रयोगमा यहाँका जंगल विनास हुँदै जाने हो भने राष्ट्रिय निकुञ्जका माथि उल्लेखित लक्ष्य कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन न त लोपोन्मुख मानिएका वन्यजन्तुको संरक्षण नै हुन्छ ।
यस क्षेत्रमा हुने गरेको चौरी र भेडापालन व्यवसायले पनि यहाँको संरक्षणमा वाधा उत्पन्न गराइरहेको छ । यहाँको झाडीमा चौरी चराउँदा एकातिर वनको विनास हुँदै जानेछ भने अर्कोतिर कुण्डको आसपासमा पाल्तु जनावरले खनी खोस्री गरेको माटो बग्दै आएर कुण्डमा पर्दछ । जसका कारण कुण्ड पुरिदै जाने सम्भावना रहन्छ । यीलगायतका विविध समस्याहरू यहाँको संरक्षणका बाधकका रूपमा रहेका पाइन्छन् । आजको युगका मानवले मानव जीवनयापनको समरूपमा लिने गरेका छन् भने संरक्षणलाई बाधकको रूपमा लिने गरेका छन् । तर संरक्षण विना मानवको जीवनयापन सहज हुँदैन भन्ने बुझनु जरूरी छ ।
गोसाइँकुण्ड क्षेत्रबाट पर्यटकीय व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी लिइराखिएको छ । जसबाट धेरै जनसंख्याको आर्थिक उपार्जनको थलो बन्दै गइरहेको छ । यहाँ पर्यटकीय विकास गर्नका लागि वरीपरीका क्षेत्रको संरक्षण वा व्यवस्थापन हुन सके मात्र वर्षोनी यहाँ आउने पर्यटकको संख्या विस्तार गर्न सकिन्छ ।
-सर्न्दर्भ स्रोत- गोसाइँकुण्ड तथा वरीपरीका सिमसारहरूको स्थलगत व्यवस्थापन योजना २०६५, रसुवा खबर, वर्ष२, अंक ८, २०६८ भाद्र २३ गते शनिबार)
Labels: पर्यटन, वातावरण, संरक्षण
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Friday, September 21, 2012 with No comments
चिलिमे प्रतिभापुञ्ज, वर्ष४, अंक ४, २०६८
रसुवा जिल्लामा मात्र नभई देशकै लागि नमुना चिलिमे जलविद्युत केन्द्र छ । २२ मेगावाट क्षमता भएको चिलिमेले हाल रसुवालीलगायत नेपाली नागरिकलाई मालिक बनाएर नमुना प्रदर्शन गरेको छ । तर यसको दीगोपनाको लागि यहाँ आउने पानीका मूलहरू संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । वर्षाका समय प्रतिघण्टा २२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने चिलिमेले हिउँदमा प्रतिघण्टा ८ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न बाध्य छ । यसको कारण पानीको प्रवाहमा कमी भएर हो । यो सबैलाई थाहा छ । देशमै नमुना रहेको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रमा चिलिमे आसपासबाट आएको पानी मुख्य शक्तिको रूपमा रहेको छ । चिलिमे वरपरका जंगल, हिमालबाट आएको पानी विद्युतमा परिणत भई रसुवाको मुख्य आम्दानी र आकर्षाको रूपमा रहेको छ । यसरी हेर्दा चिलिमेको भविष्य वा चिलिमे जस्तै अरू सम्भावित विद्युत केन्द्रका भविष्य पानीको स्रोतसँग छ । त्यति मात्र नभई रसुवालीको भविष्य नै पानीको स्रोतहरूसँग छ र स्रोत संरक्षणको आधार जंगल वा रूखसँग छ भन्दा फरक नपर्ला ।
पानी जोगाइ राख्नको लागि यहाँका वनस्पतिको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । खाना बनाउने इन्धनको रूपमा, घर बनाउने काठको रूपमा वा उद्योग सञ्चालन गर्ने निहुँमा यहाँका धेरै जंगलहरू सकिदै गएका छन् । चिलिमेको नमुना उत्पादन सबैका नजरमा लोकप्रिय भइरहँदा वा चिलिमेले झलमल्ल उज्यालो फ्याँकिरहँदा यहाँका जनताहरू उज्यालोको लागि सल्लाका रूखहरू ताछिरहेका छन् । रसुवाका विकट बस्तीहरूमा पाइला बढाउँदै जाँदा त्यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ । रातको समयमा उज्यालोको विकल्पमा वा आगो सल्काउने स्रोतको रूपमा जनताले सल्लाको चिर्पट (स्थानीय भाषामा 'मेदाङ') प्रयोग गरिरहेका छन् । जसका कारण रूख ठाडै भएपनि ढल्ने तरखरमा छ ।
अर्कातिर खाना बनाउने इन्धनको रूपमा रसुवाका सबैजसो बस्तीमा दाउरा नै प्रयोग हुने गरेको छ । हुन त विकट बस्तीहरूमा पनि नवीन प्रविधिहरूका प्रयोग भइरहेका छन् । तर त्यस्ता प्रविधिमा स्थानीय जनताको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ । वर्षोनी धेरै जंगलहरू इन्धन प्रयोग गर्ने बाध्यताले विनास हुँदै गइरहेका छन् । वन जंगल र मानव जीवनको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदाहुँदै बाध्यकारी समस्याका कारण दिनानुदिन हाम्रा वरपरका जंगलहरू निर्जीव दाउराका रूपमा परिणत भइरहेका छन् । तामाङ समाजमा आवश्यकता भन्दा पनि बढी दाउराको प्रयोग हुने गरेको छ । एकातिर जाडो याममा न्यानो बस्नुपर्ने त अर्कातिर संस्कृति र परम्परा अनुसार जाँड, रक्सी र भोज भतेर बनाउने बाध्यताले वातावरणमा प्रतिकुल असर परिराखेको छ ।
खाना बनाउन वा घर बनाउन जति वनको विनास हुने गरेको छ, त्यो त बाध्यकारी प्रयोग हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ भने र्व्यर्थको बाहानाले पनि जंगलको साइनो मेटिदै गएको छ । घाँस काट्न सजिलो हुन्छ भन्दै जनताले जंगलमा आगो लगाइदिएका दृश्य एकातिर छ भने अर्कातिर जंगली जनावरको सिकार गर्ने मनासाय वा लालचाले पनि जंगलमा आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । पहराबाट एउटा ढुङ्गा खसेर अर्कोमा ढोकिँदा पनि आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । जुनसुकै बहानामा भएपनि जंगलमा आगो लाग्दा दुर्दलभ मानिएका वनस्पति र वन्यजन्तुको विनास हुने, पानीका मूल सुक्ने र वातावरणमा खैलाबैला वा प्रदुषण भई मानव जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।
पानीका मूल संरक्षण हुन सकेन भने जलविद्युत गृहको पनि भविष्य अन्धकार हुनेछ । त्यसैले पानीका मूल संरक्षण गर्नको लागि वनजंगलको संरक्षण हुनु आवश्यक छ । बाध्यकारी समस्याका कारण होस् वा लोभ र लालचाका कारण होस्, यसरी जंगलको विनास हुँदै गएको छ । त्यसलाई रोक्नु नै जनताको समुन्नती हो । लोभ लालचालाई थन्क्याएर र बाध्यकारी इन्धन प्रयोगलाई न्यूनीकरण वा दाउरा प्रयोगको विकल्पको खोजी गरिनु पर्छ । जलविद्युत केन्द्रको भविष्य र जनताको भविष्य पनि एक अर्कामा परिपूरक भएका कारण जनता नै यसका कर्ता हुन् । भौतिक विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिदै आएका जनताले अब संरक्षणका कामहरू गर्नको लागि योजना बनाउनु पर्दछ । दाउरा कम प्रयोग गर्ने प्रविधि वा दाउरा नै प्रयोग नगर्ने उर्जा प्रविधिको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नु पर्दछ । जसबाट मानव स्वास्थ्य सुधार भई जीवन सुनिश्चित होस्, जलवायु परिवर्तनको समस्या अनुकूलन गर्न सहयोग मिलोस् र वन जंगलको संरक्षण भई पानीको संरक्षण र सदुपयोग होस् । यसैमा हाम्रो जित छ ।
यो लेखलाई Mero Report.Net मा पनि हेर्नुहोस्
तपाईलाई यो लेख कस्तो लाग्छ, सुझाव दिनुहोला फेसबुक मार्फत